सुरक्षित तरिकाले इन्टरनेट चलाउने यो हो तरिका
विनोद भट्टराई सफ्टवेयर इन्जिनियर कम्प्युटर, ट्याब्लेट, मोबाइल, ल्यापटपमा इन्टरनेट चलाउँदा जतिवेला पनि भाइरसले आक्रमण गर्न सक्छ । यस्ता डिभाइस भाइरसयुक्त भएमा त्यसको असर तुरुन्तै देखिने तथा दीर्घकालीन पनि हुन सक्छ । भाइरसले डिभाइसमा भएका व्यक्तिगत विवरणदेखि वित्तीय जानकारीसम्म पनि चोरी गर्न सक्छन् । जसले गर्दा ठूलै नोक्सानी पनि ब..
यस्ती आमासँग खान रुचाउँछन् केटाकेटी
केटाकेटीलाई खानेकुरा खुवाउन निकै सकस हुन्छ । केटाकेटीलाई अधिकांश समय खानपान गराउ..
आँखामा आँसु किन हुन्छ कम ?
आँँखामा आँसु कम भएर सुक्खा हुनुलाई सामान्य समस्या मान्न सकिँदैन । यो समस्या लामो..
थप आठ जिल्लामा नसर्ने रोग जोखिम न्युनीकरणका लागि ‘पेन प्याकेज’ कार्यक्रम लागू हुने
काठमाडौं – सरकारले नसर्ने रोगको जोखिम न्युनीकरणका लागि ‘प्याकेज अफ इसेन्सियल नन ..
पुरुषका लागि तौल बढाउने आहार
महिलाहरु जस्तै पुरुषको पनि एउटा यस्तो वर्ग छ जो आफ्नो कम तौलका कारण तनावमा छन् ।..
काठमाडौँमा पञ्जाबी खानाको स्वाद
काठमाडौँ – के तपाईं खानाको सौखिन हुनुहुन्छ ? यदी हुनुहुन्छ भने काठमाडौँमा तपाईंले पञ्जाबी खानाको स्वाद चाख्ने मौका आउँदैछ । ह्यात रिजेन्सी काठमाडौंले आयोजित पञ्जाबी फूड फेस्टीबल यही आउँदो मार्च २४ देखि ३१ तारिखसम्म आयोजना गर्दैछ । होटलको मासिक खाना परिकार प्रवद्धर्धन अन्तर्गत दिक्याफेमा भव्यताका साथ सम्पन्न हुन गइरहेको छ । एक्जु..
महिनावारीको यस्तो दुखाइमा गम्भीर हुनुहोस्
महिलामा महिनावारी प्राकृतिक प्रक्रिया हो । यो समयमा तल्लो पेट सामान्य दुख्नु पनि स्वाभाविक हो । विशेषगरी अविवाहितालाई पेट दुख्ने समस्या बढी हुन्छ । तर, महिनावारीमा खप्नै नसक्ने गरी पेट दुख्यो भने स्वाभाविक ठानेर आलटाल गर्नु गल्ती हुन सक्छ । महिनावारीको कस्तो दुखाइ गम्भीर हो त ? डा. चन्दा कार्की भन्छिन्ः महिनावारी हुँदा दैनिक काम..
यसरी गरौं परिवर्तित मौसममा छालाको सुरक्षा
सबी श्रेष्ठ ब्युटिसियन कतिपय व्यक्तिको शरीर ज्यादै संवेदनशील हुन्छ । जसले गर्दा गर्मी समयमा घामले पोल्ने तथा चिसो मौसममा सुक्खा हुने हुन्छ । मौसममा आएको परिवर्तनसँगै शरीरले आफूलाई परिवर्तन गर्न नसक्दा यस्तो समस्या देखिने हुन्छ । त्यसैले पनि मौसमअनुसार शरीर तथा छालाको सुरक्षाका लागि सुरक्षित तथा राम्रो साबुन वा मोस्चराइजरको प्रयो..
तपाईंलाई थाहा छ, नाकमा पसिना आउने कारण
अनुहारमा पसिना आउनु साधारण प्रक्रिया हो । तर, कसैकसैलाई धेरै नै पसिना आउँछ । खासगरी कतिपयलाई नाकमा बढी पसिना आइरहन्छ । यस्ता व्यक्ति पसिनाकै कारण हैरान हुन्छन् । नाकको पसिनाका कारण महिलाले बढी पीडा महसुस गर्छन् । मेकअप गरेर बाहिर निस्कियो, केही बेरमै पसिना आएर मेकअप लतपतिन्छ । नाकमा किन बढी पसिना आउँछ र कसरी […]
धेरै फोहोर हुने घरका कुन-कुन स्थान ?, जान्नुहोस्
घरका सम्पूर्ण भाग सफा, स्वस्थ तथा चम्किलो बनाउने चाहना सबैको हुन्छ । सोहीअनुसार कुनाकुना पनि चम्किलो बनाउन निकै मिहिनेत गरिन्छ । तर, सबैभन्दा फोहोर हुने स्थानको सफाइमा भने ध्यान नदिएको पनि हुन सक्छ । सबैभन्दा बढी हानिकारक कीटाणु हुने स्थान थाहा नभएर पनि सफाइमा बेवास्ता भएको हुन सक्छ । त्यसैले सफाइ गर्नुअघि सबैभन्दा बढी फोहोर [&h..
तपाईंलाई थाहा छ, मोतीबिन्दुले झुक्याएर गुमाउँछ आँखाको ज्योति
डा. वेन लिम्बू, अकुलोप्लास्टिक सर्जन, ग्लोबल आँखा केन्द्र मोतीबिन्दु यस्तो रोग आँखाको भित्री भागमा एउटा पारदर्शी लेन्स हुन्छ । यो लेन्सले काम गर्न छाड्नु अर्थात् अपारदर्शी हुँदै जाने अवस्था नै मोतीबिन्दु हो । मोतीबिन्दुले एक्कासि आँखाको ज्योति गुम्दैन । बिस्तारै ज्योति कमजोर गराउँदै लगेर नदेख्ने अवस्थामा पुर्‍याउँछ । क्रमशः आँखा..
स्मरणशक्ति बलियो बनाउन यी १० कुरामा ध्यान दिनुहोस्
अर्पण शर्मा , धेरै शब्द स्मरण गर्ने विश्व कीर्तिमानी -विद्यार्थीले अध्ययन गर्दा हरेक शब्दलाई चित्रमा ढालेर पढ्नुपर्छ । हरेक कुरालाई फरक तरिकाले सोच्नुपर्छ । -रटेर पढ्दा दिमागमा घुस्दैन । त्यसैले हरेक शब्दलाई कोडिङ गरेर पढ्नुपर्छ । -निद्रालाई असर पर्ने गरी अध्ययन गर्नु हुँदैन । बिहान चाँडै उठ्न पनि अलार्मको प्रयोग गर्नु हुँदैन ..
तौल घटाउनका लागि शरिरमा लगाइन्छ आगो, निकै लोकप्रिय भइरहेछ यो पद्धती
चीनमा बस्ने ११ वर्षीय लि ह्यांगलाई एउटा अचम्मको रोग छ । यसलाई ‘प्रेडर विलि सिन्ड्रोम’ भनिन्छ । यो रोग लागेका मानिसहरुले अत्यधिक खाने गर्दछन् जसका कारण उनीहरुको तौल तिव्र रुपमा बढ्ने गर्दछ । यस्तै भएको छ लि ह्यांगसँग । उनको तौल १ सय ४७ किलो छ । तर उनले जसरी आफ्नो तौल घटाइरहेका छन् त्यो […]
१७ वर्षदेखि साङ्लोमा बाँधिएका लीलाप्रसादको उपचार गर्ने विण्डसीको घोषणा
झापा– सत्र वर्षदेखि साङ्लोमा बाँधिएका झापा राजगढ–८ का लीलाप्रसाद चम्लागाईको निःशुल्क उपचार हुने भएको छ । उनको उपचार बिर्तामोडस्थित विण्डसी हस्पिटलले निःशुल्क गर्न लागेको हो । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाईले उनको उपचार निःशुल्क गर्ने घोषणा गर्दै मंगलवार विहान सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमप्रसाद तिवारी सहितको टोली च..
नाइटोमा तेल लगाउनुका यी फाइदा बारे जानकार हुनुहुन्छ तपाईं ?
के तपाईंलाई लाग्छ, लोक प्रचलित उपचारले काम गर्दैन ? तर यस्तो हुँदैन । थुप्रै यस्ता औषधी र उपचार छन् जुन आज पनि प्रभावकारी छन् । तपाईंलाई अचम्मका लाग्ला कि नाइटोमा तेलको केही थोपा लगाउँदा तपाईंलाई कति फाइदा हुन्छ । नाइटोमा तेल लगाउँदा जोर्नी दुखाई, घुँडाको दुखाई, रुघा–खोकी र छालासम्बन्धि रोगबाट राहत पाइन्छ । १. फुटेको […]
यसकारण महत्वपूर्ण हुन्छ गर्भावस्थाको चौथो हप्ता
हरेक गर्भवती महिलाको सपना उनको जन्मिन लागेको शिशु पूर्ण रुपमा स्वस्थ होस् भन्ने हुन्छ । यसका लागि गर्भावस्थाको ९ महिना राम्रो हेरबिचार निकै आवश्यक हुन्छ । भ्रुण विकासका लागि चौथो हप्ता निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । महिला जब गर्भवस्थाको प्रारम्भिक लक्षण पार गरेपछि चौथो हप्तामा पुग्नेबित्तिकै उनको सुरुवाती दिनभन्दा धेरै हेरबिचारको आवश्य..
लसुनको बोक्राको १० चमत्कारिक फाइदा, योभन्दा पहिले थाहा थिएन तपाईंलाई
लसुन जस्तै यसको बोक्रामा पनि एन्टी ब्याक्टेरियल, एन्टी भाइरल र एन्टी फंगल गुण हुने गर्दछ । यसमा एलिसिन कम्पाउन्ड हुन्छ जुन स्वास्थ्यको लागि निकै फाइदाजनक छ । लसुनको बोक्रालाई पिसेर छालामा लगाउँदा पनि थुप्रै फाइदा हुने गर्दछ । नेशनल इन्सिटच्युट अफ आयुर्वेद, जयपुरका सह–प्राध्यापक डा. सि आर यादवले लसुनको बोक्राका १० प्रयोगबारे जानक..
‘औषधि सेवन गराउने अभियान’
काठमाडौं – हात्तिपाइले रोग नियन्त्रणका लागि ‘औषधि सेवन गराउने अभियान’ दुई चरणमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले आज पत्रकार सम्मेलन गरी आगामी चैत ५, ६ र ७ गते पहिलो चरण तथा चैत १७, १८ र १९ गते दोस्रो चरणमा यो अभियान सञ्चालन गर्ने जानकारी दिएको हो । यसअघि […]
गर्भावस्थामा खान नहुने यी फलफूल
गर्भावस्था एक महिला र उनको भ्रुणको लागि निकै नाजुक अवस्था हो । त्यसकारण यदि तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ भने आफूले खाने प्रत्येक कुराको अतिरिक्त ध्यान दिन आवश्यक छ । गर्भावस्थामा तपाईंको प्रतिरोधी क्षमतामा ह्रास ल्याइदिन्छ जसका कारण तपाईं र तपाईंको बच्चा ब्याक्टेरिया र भाइरसले सजिलै आक्रमण गर्न सक्छन् । गर्भावस्थामा केही यस्ता खानेकु..
होली विशेष: चीनिमा मिसाउनुहोस् कागतीको रस, मिनेटभित्रै हट्छ रङ
होली अर्थात् रङहरुको पर्व । होलीको दिनमा रङले निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । तर दिनको अन्त्यमा रङ हटाउने कुरा तपाईंको लागि समस्या बन्नसक्छ । तर अब चिन्ता नलिनुहोस् ब्यूटी एक्सपर्ट निक्की बावाले होली खेल्नुभन्दा पहिले केही कुरामा ध्यान दिए एलर्जी नहुने र सजिलै रङ हटाउन सकिने तरिका बारे जानकारी दिएकी छिन् । रसायन मिसाइएका रंगले [..
यदि तपाईं पुरुष हुनुहुन्छ भने महिलाका यी १० कुरा पक्कै थाहा पाउनुहोस्
महिलासँग जोडिएका यस्ता विभिन्न स्वास्थ्य समस्या छन् जुन बिस्तारै कुनै ठूलो रोगको रुपमा विकसित हुनसक्छ । थुप्रै पटक व्यस्त जीवनशैलीका कारण महिला आफ्नो स्वास्थ्यमा त्यति ध्यान दिन पाउँदैनन् । त्यसकारण यसबारे पुरुषलाई पनि थाहा हुन अत्यावश्यक छ । भारतकी स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. निरजा पौराणिकले महिलाको स्वास्थ्य सम्बन्धि यस्ता १० समस्..
होटल साङ्ग्रिलाको भान्छामा ब्याम्बो बिर्यानी
काठमाडौं– मध्यपुर्वी भारतको लोकप्रिय मुगल पकवान ब्याम्बो बिर्यानीलाई होटल साङ्ग्रिलाले आफ्नो भान्छा मार्फत हप्ताको दुई चोटी पस्किने भएको छ । ब्याम्बो बिर्यानी दक्षिण भारतको निकै लोकप्रिय खाना मध्ये एक हो । ब्याम्बो बिर्यानी तयार पार्ने भगवा, दही, ल्वाङ्ग, दालचिनी, अलैँची , तेजपात र बासमती चामल आदीको प्रयोग गरिन्छ । यो बाँसमा बना..
पार्टनरसँग सुत्नुका यी अचम्मका फाइदाहरु तपाईंले पहिले सुन्नुभएको छैन
के तपाईंलाई थाहा छ ? पार्टनरसँग सुत्दा तपाईंलाई थुप्रै रोग लाग्नबाट बचाउँछ । यदि तपाईं कोहीसँग सुत्नुहुन्छ विशेषगरी पार्टनरसँग टाँस्सिएर सुत्नुहुन्छ भने यो तपाईंको स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक हुन्छ । एक शोधका अनुसार एक्लै सुत्ने व्यक्तिको तुलनामा पार्टनरसँग सुत्ने व्यक्तिको आयु लामो हुन्छ । साथै, उनीहरु स्वस्थ जीवनयापन गर्न सक्षम ..
होली खेल्नुअघि गरौं यस्तो तयारी
—खुसी बाँड्ने रङहरूको चाड फागु पुर्णिमा नजिकिँदै छ । यो दिन रङहरूमा रंगिँदै साथीभाइबीच रहेको तिक्तता पनि बिर्सने गरिन्छ । तर, कहिलेकाहीँ केमिकलयुक्त रङहरूको प्रयोगले सबै रमाइलोलाई नै बिर्साइदिने बनाउन सक्छ । त्यसैले होलीका रङमा रंगिनुभन्दा पहिला केही सावधानी अपनाउनु भने आवश्यक छ । सामान्य सावधानी अपनाउन सके होलीमा कुनै पनि डरविन..